Taariikh nololeedka Raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Taariikh nololeedka Raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Ra’iisul wasaarahan cusub,ayaa lasheegay in uu yahay Injineer ku takhasusay Dhismaha Kaabeyaasha Dhaqaalaha iyo Deegaanka, isaga oo Waxbarashadiisa Masterka ee takhasuskan ka qaatay Machadka Royal ee Teknoloojiyadda ee dalka Sweden, sanadkii 2000.
Waxaa 57 jir ahm aan hore loogu arag saaxadda siyaasadda hase ahaatee waxa uu kasoo shaqeeyay arrimaha horumarinta.
War ay daabacday wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA, ayaa lagu sheegay in Maxamed Xuseen Rooble uu ka shaqeynayey 14-kii sano ee la soo dhaafay horumarinta dalka, gaar ahaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhallinyarada, xoojinta maalgashiga, ganacsiga iyo dib u dhiska Kaabeyaasha Dhaqaalaha.
Hawlaha ugu horreeyay ee horyaalla raysal wasaaraha cusub, waxaa kamida in uu soo dhiso xukuumad dalka ka qabata doorashada heer federal ee lagu wado in ay qabsoonto bilawga 2021.
Waxaa kale oo looga fadhiyaa in uu meel mariyo heshiisyada doorashada ee ay gaadheen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Hoggaamiyaha Xisbiga wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ayaa qoraal uu bartiisa facebook ku baahiyay, waxa uu uga digay raysal wasaaraha cusub in aanu hor boodin ololaha doorashada ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, hase ahaatee uu dhex u noqdo isuna soo dhaweeyo saamilayda siyaasadda .
Hoos u dhicii ugu weynaa oo kuyimi dhoofinta shiidaalka Sucuudiga.
DF oo billaabeysa wajiga 3aad ee dib u habeynta CXDS,Sawirro